– चिनियाँ लगानीमा झापाको दमकमा औद्योगिक पार्क निर्माण हुने भएको छ । पार्क निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी लासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोईन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच बिहीबार सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार ६४ अर्ब लगानीमा पार्क बन्नेछ ।
– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १९ औं उपकुलपति चयन गर्नका लागि गठित नाम सिफारिस समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको छ । समितिले पहिलो नम्बरमा डा. भगवान कोइराला, दोस्रोमा डा। धर्मकान्त बास्कोटा र तेस्रोमा चन्द्रमणि पौडेलको नाम सिफारिस गरेको शिक्षामन्त्रालयका उपसचिवले जानकारी दिए ।
– उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट महसुल भनी निर्धारण गरेको शुल्कमा असहमत हुने ग्राहकले प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने ठहर गरेको छ । नियमित कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी वैकल्पिक उपचारको बाटो खोज्न नहुने भन्दै उच्च अदालतले १२ वटा विभिन्न उद्योगीहरूले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
– सरकारले बिदाको दिनमा पनि बजार अनुगमन गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत नियमित बजार अनुगमन हुने जानकारी दिँदै कुनै समस्या भएमा, ठगी भएको र कानूनविपरीतको कार्य भए प्रहरीलाई खबर गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् ।
– यो वर्षको दसैं किनमेलका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४७ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यो यही असोज १ देखि १५ सम्म बैंक र वित्तीय संस्थाबाट झिकिएको पैसा हो । दसैं– तिहारको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी पैसा बाहिरिने गरेको छ ।
– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतस् अध्यक्ष हुने प्रावधान महासंघको विधानबाट तत्काल हटाउन माग गर्नुभएको छ । उपाध्यक्ष प्रधानले महासंघको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने तर्क पनि अघि सार्नुभयो ।
– प्रदेश १ को पहिलो आवधिक योजनाले अर्थिक पाँचवर्षभित्र प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय एकहजार ६ सय २० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रथम आवधिक योजना अनुसार यो अहिलेको डलर मूल्यमा एक लाख ८४ हजार ६८० रुपैयाँ हो। अहिले प्रदेश १ को प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६२ डलर छ।
– ऐतिहासिक गोरखा दरबारमा पृथ्वीनारायण शाहकालीन सेनाको झल्को दिने पोसाक लगाएर नेपाली सेना खटिन थालेको छ । गोरखाबाटै नेपाली सेना गठनको सुरुवात भएकाले त्यही कालखण्डको झल्को दिने पोसाक लगाएर सेना खटाउन थालिएको गोरखास्थित रणसिं दल गणका गणपतिले बताउनुभयो ।
– ठूला चाडहरु दशैं र तिहारलाई लक्षित गरी रुपन्देही प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ । चाडपर्वका बेलामा राजमार्गमा चल्ने लामो दूरीका रात्रिबस र अन्य सवारी साधनलाई पनि सुरक्षित बनाउन हतियारसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न थालिएको छ ।
– नेपाल आयल निगमले दशैंमा कुनै पनि खाले इन्धनको अभाव नहुने स्पष्ट पारेको छ । केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यका र देशका मूख्य सहरहरुमा इन्धन खपत बढेको भन्दै निगमले अभावको आशंकामा असुरक्षित भण्डारण नगर्न उपभोक्तालाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
– नेपालमा आयात गरिएका केही बीउका बालीमा अन्न नलागेको पाइएपछि विज्ञहरूले यस्ता बीउलाई मान्यता दिनुअघि गरिने परीक्षण अवधि बढाउन आवश्यक रहेको सुझाएका छन्। पछिल्लो समय सरकारले नै सूचीकृत गरेको गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउबाट बाला नै नलागेपछि बीउ बेचेको कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताएका थिए।
– सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत जाँ टोडले बढ्दो सडक दुर्घटना नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारसँग काम गर्न आफू इच्छुक रहेको बताएका छन्। गत साता नेपालको भ्रमणमा आएका उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारी, यातायात व्यवसायी तथा नागरिक समाजसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
– लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा अपुग भएपछि इलाका वन कार्यालयको जग्गा लिने तयारी गरेको छ । स्थानीयले १० बिघा जग्गा उपलब्ध गराएकामा नापी कार्यालयले दुई वर्षअघि ६ बिघा २ कट्ठा ९ धुर कायम गरिदिएपछि अस्पताललाई जग्गा अभाव भएको हो ।
– नेपाल चिकित्सक संघले मेडिकल कलेजहरुको शुल्क तत्काल निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । चर्को शुल्क असुली गरेको भन्दै मेडिकल कलेजहरुविरुद्ध आन्दोलन भइरहँदा नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले तत्काल शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
– भ्रमण वर्ष सन् २०२० मा प्रदेश नं २ ले पाँच लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने गरी तयारी थालेको छ । भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्यलाई सफल बनाउन प्रदेश नं २ समितिले प्रदेशको आठवटै जिल्लामा सरसफाइसँगै प्रदेशभरि रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक धरोहरका साथै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई लिपिबद्ध गर्न एकीकृत दस्तावेज गर्न लागेको छ ।